Malezia - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Malaizia)
Sainam-pirenen' i Malezia
I Malezia dia firenena ao Azia Atsimo-Atsinanana. Izany dia fanjakana federaly ahitana faritany mizaka tena 13. Zarain’ ny Ranomasin’ i Sina Atsimo ny faritra roa lehiben’ i Malezia. Eo amin' ny Saikinosin' i Malay ny renitaniny. Manoloana ny andilan-dranomasin' i Malacca izy io ao andrefany ary ny Ranomasin’ i Sina Atsimo ao amin’ ny morontsiraka atsinanany. Kuala Lumpur izay eo amin’ ny renitany eo amin’ ny saikanosy malay, no renivohitra. Vao nafindra ho ao Putrajaya ny renivohitra federaly, izay tanàna vao noforonina ary natao manokana ho an’ ny fitantarana.
Ao Malezia dia ahitana foko maro. Avy amin’ io foko io ny ankamaroan’ ny mponina ao. Miampy izany dia ahitana ireo foko sinoa sy karana. Ny teny malay no teny ôfisialy fa miasa matetika ny teny anglisy amin’ ny fanabeazana sy ny raharaham-barotra. Mahatratra 130 ny isan’ ny fiteny tenenina ao Malezia: 94 ao amin’ ny faritra malain’ i Bôrneô ary 40 ao amin’ ny saikanosy. Ny finoana silamo no finoana ôfisialy, fa afaka mitazona ny finoany avy ireo tsy silamo.
Ny fiteny maley[hanova | hanova ny fango]
Ny fiteny malay na fiteny maley dia fiteny aostrônezianina izay tenim-pirenen' i Malaizia, Indônezia ary Boroney. Ny fiteny malay dia fiteny ao amin' ny vondrom-piteny aostrônezianina (izay ahitana ny fiteny tagalôga sy ny fiteny malagasy koa, ohatra). Na dia tsy mifankahazo aza ny mpiteny malay sy ny mpiteny malagasy, manaitra ny fitoviany. Maro ny teny iraisan' ireo fiteny maro ireo, indrindridra mikasika ny fahasalamana sy ny vatana ary biby fahita matetika. Betsaka koa ny fitovizana amin' ny anaran' ny isa.
Sarin-tanin' i Malezia
Mampiasa ny abidy latina (rumi) ny fiteny malay ankehitriny, na dia mbola miasa koa aza ny abidy arabo (jawi), abidy ôfisialin' i Malaizia, Singaporo ary Indônezia.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Malezia&oldid=1040759"
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 14:46 ity pejy ity.